သမ္မတထရန့်က ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကို ရွေးချယ်ခွင့်များအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးထား ဟုဆို - Yangon Media Group
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်က ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအတွင်း စစ်ရေးအရ ဝင်ရောက် စွက်ဖက်ခြင်းကို ပယ်ချရန် ထပ်မံငြင်းဆန်ခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အင်္ဂါနေ့က ဘရာဇီးသမ္မတ ဂျာဘော်ဆိုနာရိုနှင့် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအပြီး အိမ်ဖြူတော်တွင် ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပရာတွင် သမ္မတထရန့်က ယခုကဲ့သို့ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံတို့သည် ဗင်နီဇွဲလားအတိုက်အခံခေါင်း ဆောင် ဂျူအန်ဂွိုင်ဒိုကို ထောက်ခံအားပေး နေသည့် နိုင်ငံများဖြစ်သည်။ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်ဂျူအန်ဂွိုင်ဒိုသည် လက်ရှိသမ္မတ နီကိုလတ်စ်မာဒူရို၏ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် အုပ်ချုပ်မှု အဆုံးသတ်ရေးအတွက် သူ့ကိုယ်သူ ကြားဖြတ်သမ္မတအဖြစ် ထုတ်ဖော်ကြေညာထားသူဖြစ်သည်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သမ္မတထရန့်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနှင့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအပေါ် အပြင်းထန်ဆုံး အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုများ ဆက်လက်ပြုနေ ကြောင်း၊ လိုအပ်ပါက ပိုမိုပြင်းထန်သော အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ ထပ်မံလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ဗင်နီဇွဲလားစစ်တပ်အနေနှင့် သမ္မတနီကို လတ်စ်မာဒူရိုကို ထောက်ခံအားပေးနေမှုအား အဆုံးသတ်ရန်ကိုပါ တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
Ref: Bloomberg , NHK
ဗလီနှစ်ခု အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုတွင် မိမိ၏လုပ်ပိုင်ခွင့် အစွမ်းကုန်အသုံးပြုကာဆောင်ရွက်မည်ဟု ??
လဝက အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း ၂၂၅ ဦးကို ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက် နယ်စပ်ဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ချထ??
နေရပ်စွန့်ခွာ ပြန်လည်လက်ခံရေး ပြင်ဆင်ထားမှုနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်မှု ဆောင်ရွက်ချက်များ ကုလသ?
ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ကုန်တင်ရေယာဉ် ကျောက်ဆောင်နှင့် တိုက်မိပြီး အောက်ပိုင်း နစ်မြုပ်
“ကျွန်တော်က ရှမ်းစကားပြောတတ်တဲ့ ရှမ်းပါ။ ရှမ်းစကားပြောတတ်တာနဲ့တင် အများစုက ထောက်ခံနေကြပြါ